Talaalada | Ramsey County
Ku hel talaalka koowaad ee Pfizer ama Moderna $50 oo abaal-marin ah (giftcard), inta daqaalo loo hayyo
Qof kasta oo 5 jir ah ama ka weyn wuxuu qaadan karaa talaalka COVID-19.
Jeenaweri 29 (3 - 6 galabnimo)
Pfizer 5+ tallaalka kowaad, tallaalka labaad / Pfizer 12+, Moderna 18+ tallaalka xoojiyaha.
Feebarweri 5 (3 - 6 galabnimo)
Feebarweri 12 (3 - 6 galabnimo)
Jeenaweri 27 (3 - 6 galabnimo)
Pfizer 5+ tallaalka kowaad, tallaalka labaad / Pfizer 12+ tallaalka xoojiyaha.
Feebarweri 3 (3 - 6 galabnimo)
Feebarweri 10 (3 - 6 galabnimo)
Noocyada (Delta, Omicron)
VNoocyadu waa wax caadi oo ah fayrasyada sida COVID-19. Fayrasyadu in badan ayay is bedelaan isbedelka oo noocyo cusub ayaa la filayaa inay yimaadaan muddadiiba. Nooc kasta oo fayris ma faafaan, mararka qaar wey faafaan. Xarumaha Kahortagga iyo Xakamaynta Xanuunka iyo ha'ayadaha kale ee caafimaadka dadweynaha ayaa korjoogtaynaya noocyada fayriska oo sababaya COVID-19 ee Maraykanka iyo caalamka.
Waaxda Caafimaadka Minnesota waxay xaqiijisay inay jiraan kiisas nooca fayruuska Omicron ah Degmada Ramsey iyo Gobolka Minnesota.
Sanisyahanka ayaa hadda ka shayaqnaya sidii loo ogaan lahaa fudaaydka ee Omicron u faafto, sida ay dadka ugu xanuunsadaan, sida ee talaalada iyo dawaynta hadda loogu isticmaalo ay inaga difaacaan Omicron.
Caafimaadka dadweynaha ayaa sii wadi doonaa inuu wadaago macluumaadka iyo inuu qof walba ku dhiirigeliyo inuu gacan ka gaysto kahortagga faafitaanka COVID-19.
Istalaal oo haddii aad uqalanto, qaado tallaalka xoojinta ah. Hel ruugta tallaalka oo kuu dhaw.
Guriga joog haddii aad xanuunsanayso.
Ka dheerow meelaha lagu badan yahay.
Feejignaan dheeri ah yeelo si aad uga dheeraato inaad qaado fayraska haddii aad xaalado caafimaad daro la nooshahay ama aad la nooshahay qof xaalado caafimaad daro la nool.